Igumbi le-ensuite elinesidlo sakusasa - I-Airbnb
Igumbi le-ensuite elinesidlo sakusasa
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguLinzi
Igumbi elincinci elipholileyo neliqaqambileyo, eline-ensuite kunye nomnyango wakho wabucala. Inokupholisa kwefeni. Inobubanzi obuziimitha ezi-5 zebhedi ephindwe kabini, ukhuseleko lwenethi yeengcongconi, kunye nokugcinwa kwendlu kabini ngemini. Kukwakho nebhokisi etshixwayo yokugcina izinto zakho zexabiso. Ilinen kunye neetawuli zibandakanyiwe, kwaye zitshintshwa rhoqo. Igumbi lokuhlambela lineshawa yamanzi ashushu, ngesolar, kwaye kukho umbane obuyileyo xa kukho ukunqunyulwa kombane.
Kukwakho nendawo yokuhlala yabucala kwipatio ngaphandle kwegumbi lakho kunye nendawo yokugcina iikite.
Ivakala ngathi likhaya kodwa inazo zonke iinkonzo eziluncedo zehotele.
Yindawo eyodwa apho unokuba nentabalala yendalo kunye nolwandle kodwa ube yimizuzu embalwa yokuhamba ukusuka kwindawo yokutyela kunye neevenkile.
Igumbi likufuphi nechibi, elithe nca kwaye linoxolo phakathi kwamahlathi ashinyeneyo kunye neegadi. Inendawo yokuphumla, ene-hammock kunye neebhedi zelanga. Kukho i-wifi kunye neesokethi zombane ngoko unokusebenza apha ukuba uyafuna.
Ikwipropathi entle engaphambili elunxwemeni kwaye ingaphantsi komzuzu ukuhamba ukuya elunxwemeni, ibha yolwandle, indawo yokutyela kunye neziko lemidlalo yamanzi.
IKenyaways ihlala ivaliwe ngexesha lemvula ngo-Epreli/Meyi kwaye ngamanye amaxesha kwixesha eliphantsi Oct/ Nov.
Igumbi elincinci elipholileyo neliqaqambileyo, eline-ensuite kunye nomnyango wakho wabucala. Inokupholisa kwefeni. Inobubanzi obuziimitha ezi-5 zebhedi ephindwe kabini, ukhuseleko lwenethi yeengcongconi, kunye nokugcinwa kwendlu kabini ngemini. Kukwakho nebhokisi etshixwayo yokugcina izinto zakho zexabiso. Ilinen kunye neetawuli zibandakanyiwe, kwaye zitshintshwa rhoqo. Igumbi lokuhlambela lineshawa yamanzi ashushu,…
I-Diani Beach yeyona ndawo inkulu yokuphumla elunxwemeni kuLwandlekazi lwaseIndiya eKenya, eMpuma Afrika. Imi kwiikhilomitha ezingama-30 (19 mi) emazantsi eMombasa.
Ivotelwe njengeyona ndawo iphambili elwandle e-Afrika isihlandlo sesihlanu iqhuba ukusukela ngo-2015.
Ulwandle lu malunga neekhilomitha ze-17 (i-11 mi) ubude, ukusuka kumlambo waseKongo (Tiwi) ukuya ngasentla kunye nolwandle lwaseGalu Kinondo ukuya ngasezantsi. I-16th inkulungwane ye-Kongo Mosque ibekwe kwincam esenyakatho ye-Diani Beach, apho umlambo we-Kongo ugeleza elwandle. Sisakhiwo sokugqibela esisaseleyo sesiSwahili eDiani. Ungayindwendwela kwaye uthathe uhambo oluncinci lomnikelo omncinci kuluntu lwama-mosque abasathandaza apho.
IDiani yenye yezona ndawo zidlamkileyo zokhenketho eKenya. Abantu bomthonyama bale ndawo yiDigo, enye yezizwe ezilithoba ezaziwa ngokuba yiMijikenda. Namhlanje le ndawo ibandakanya abantu baseKenya bezizwe ezahlukeneyo abaye bafudukela eDiani.
Amanzi angekho nzulu kufutshane nonxweme kumaza asezantsi, anentlabathi engaphantsi kwamanzi kunye neingqaqa. Kukho ikhefu elincinci lolwandle kunye namanzi anzulu kumaza aphezulu. Kukho ulwalwa oluhamba ngokunxusene nolwandle malunga ne-20 km. Ulwandle lwaseGalu ukuya emazantsi, apho iKenyaways ikhoyo sesona siphelo solwandle sigcinwe ngakumbi ngelixa iDiani Beach North iyindawo esembindini apho kukho iivenkile, iivenkile ezinkulu kunye neeklabhu ezinengxolo kunye neebhari.
Ngaphakathi ukusuka elunxwemeni, kukho indawo yokugcina iShimba Hills National reserve ejikelezwe ngamasimi amaninzi emithi yesundu akhokelela eTsavo eMpuma nakwimimandla yasendle eNtshona malunga neeyure ezi-3 ngendlela. Ngaselunxwemeni kukho ihlathi elinyamalalayo elingaselunxwemeni, ikhaya le-Black kunye ne-colobus inkawu ebonwa rhoqo eKenyaways.
I-Diani Beach ikwayindawo edumileyo ye-kitesurfing, kunye ne-snorkelling. Ikhuselekile, ishushu kwaye intle ngendlela emangalisayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Linzi
ULinzi ngamanye amaxesha uba sesakhiweni, kodwa ngokwesiqhelo umphathi uSteven okanye uAlex usemsebenzini.
Oliver and Hal, abaphathi yokutyela ziyafumaneka yonke imihla.
U-Boris noKathi, abaphathi bemidlalo yamanzi bafumaneka yonke imihla.